Naghachi Data si Kingston Flash Drive na 3
> Resource> Flash Drive> Kingston Flash Drive Iweghachite: Naghachi Data si Kingston Flash mbanye ke 3 Nzọụkwụ
Enwere m ike Naghachi Data si My Kingston USB Flash Drive 8GB?
M nwere nsogbu m Kingston flash mbanye. Mgbe m jikọtara ya na m na Windows XP kọmputa, ọ ghọtara na kọmputa m ma apụghị m imeghe ya. Na m nwere ọtụtụ ihe dị mkpa photos na ya. Dị ụzọ ọ bụla iji weghachite ha?
Ọ bụrụ na ị gbalịrị gị Kingston flash mbanye na ndị ọzọ na kọmputa na ọ pụrụ gaghị emeghe abughi, formatting gị flash mbanye ga-abụ ezigbo mkpebi. Tupu i kpebie Ọkpụkpọ gị Kingston flash mbanye, i nwere ike ịhụ Kingston flash mbanye mgbake software naghachi faịlụ site na gị Kingston flash mbanye.
Lee, m nwere ike ikwu Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac maka gị. N'agbanyeghị gị Kingston flash mbanye data na-efu ruru formatting, usoro nsogbu ma ọ bụ na mberede nhichapụ, ha nwere ike mfe Ewepụtara a usoro. Ihe omume ahụ bụ dakọtara na ma Windows na kọmputa na Mac.
Nweta ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery na-amalite na mgbake ugbu a
Naghachi faịlụ site Kingston Flash mbanye ke 3 Nzọụkwụ
M ga-egosi gị otú ị naghachi faịlụ site na Kingston flash mbanye na Windows version nke Wondershare Data Recovery. N'ihi na Mac onye ọrụ, ị pụrụ iji Mac version iji nweta gị ihe na yiri nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode hazie mgbake
Tupu igba egbe Wondershare Data Recovery, i kwesịrị jikọọ gị Kingston flash mbanye na kọmputa gị.
Mgbe launching usoro ihe omume, ị ga-ahụ a mmalite window na-enye 3 mgbake ụdịdị. Ebe a ka na-họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode.
Nzọụkwụ 2 Họrọ mbanye akwụkwọ ozi maka gị Kingston flash mbanye ka iṅomi furu efu data
Usoro ihe omume window na-adịghị anya depụtara niile ike draịva na kọmputa gị, gụnyere nchekwa ngwaọrụ. Ebe a ị dị nnọọ mkpa iji họrọ otu maka gị Kingston flash mbanye na pịa "iṅomi" ka iṅomi maka furu efu data.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe a mma scanning N'ihi ya, i nwere ike ikpebi ka "Kwado Deep iṅomi", ma ọ dịruru ogologo karịa nkịtị iṅomi.
Nzọụkwụ 3 Naghachi hụrụ faịlụ selectively
Mgbe iṅomi okokụre, niile hụrụ ọdịnaya ga-egosipụta na edemede ma ọ bụ ụzọ. Ị nwere ike ịlele ha otu otu ka ịhụ ma gị chọrọ faịlụ na-hụrụ ma ọ bụ. Plus, ọ bụrụ na ị na-echeta faịlụ aha, ị nwere ike ịchọ ya na-achọ mmanya.
Na njedebe, ị dị nnọọ mkpa iji họrọ faịlụ na ị chọrọ iji weghachite na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Cheta na: Biko họrọ a nchekwa na kọmputa gị na-faịlụ. Ọ ga-eduga data overwritten ma ọ bụrụ na ị na-azọpụta ha gị Kingston flash mbanye ozugbo ke mgbake.